सरकार र पार्टीको कामप्रति प्रचण्ड निराश | NepalDut
सरकार र पार्टीको कामप्रति प्रचण्ड निराश
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उस्तै परे आफु जंगल जान तयार रहेको अभिव्यक्तीले राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ।
कार्ल मार्क्सको २ सय १ औँ जन्मस्मृति कार्यक्रममा आयोजित ‘समृद्धि र समाजवाद : हामी कहाँ छौँ ?’ विषयक विमर्श कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका थिए। उनले नेकपा भित्र ‘महाबहश’ हुनु पर्ने पनि संगसंगै बताएका छन्।
प्रचण्डको यस्तो अभिब्यक्तिका पछाडी पार्टीमा देखिएको ब्यक्तिवाद, गुट-उपगुट आदीको चक्करले प्रचण्डमा निराशा देखिएको छ। उनले आफ्नो मनतब्यको क्रममा पार्टिमा लाखौं कार्यकर्ता भए पनि एक्लै हिंडिरहेको जस्तो लागेको बताएका थिए।
उक्त कुरा राख्ने क्रममा उनले भने ‘अहिले हामी लाखौं पार्टी सदस्य छौं, राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा छौं । तर, हामीमा हिजोको त्याग, तपश्या, निष्ठा कति छ भन्ने फर्केर हेर्दा बडो विचित्र लाग्छ । हामी कता गइरहेका छौं भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ ।’
उनले दुई-तिहाई सरकार भएर पनि काम गर्न नसकिरहेको र पार्टी भित्र असली नेता कार्यकर्तामा जोस-जाँगर नरहेको प्रति ईगिंत गरेका थिए। अर्का अध्यक्ष केपी ओलीको कार्यशैली प्रति सिधै केही नभने पनि उनको ईशारा त्यतै देखिन्थ्यो।
नेपाली राजनीतिका चतुर र कुशल खेलाडीको निराशाजनक कुराले शक्तिशाली पार्टी र सरकारमा केहि समस्या रहेको स्पष्ट देखिन्छ। सरकारको लोकप्रियताको ग्राफ जुन गतिमा ओरालो लागेको छ त्यसले पनि निराशा ल्याएको हुनसक्छ।
सरकारका बारे प्रश्न उठाउनेलाई अरिंगाल जसरि आक्रमण गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार कार्यकर्ताहरुलाई अपिल गर्ने गरेका थिए। पछिल्लो समय उनले पार्टीका नेता-कार्यकर्ताहरुलाई पनि प्रश्न गर्न बन्देज लगाए जस्तै गरेका थिए। नीति तथा कार्यक्रममा नेकपा भित्र छलफल नै भएन। सांसदहरुले आफ्नो कुरा राख्नै पाएनन्।
यसअघि पार्टीमा महिला प्रतिनिधित्वका बारे प्रश्न उठाउने महिला नेता-कार्यकर्ताहरुलाई ट्याउँट्याउँ नग्रन भन्दै अपहेलित ढंगबाट छेउ लगाईएको थियो। यस्ता अनेक घट्ना भैरहेको समयमा पार्टीमा ‘महाबहश’ चलाउनु पर्ने बेला भएको कुरा गर्दा कता कता अर्का अध्यक्ष ओलीसँग प्रचण्ड निराश भैसकेका पो हुन् की भन्ने आभास दिन थालेको छ।
सरकारको आलोचनाको ग्राफ बढेको छ। पार्टीभित्र अन्योल छ। के बोल्ने नबोल्नेमा कार्यकर्ताहरु अलमलमा छन्। कसलाई प्रश्न गर्ने भन्ने निश्चित छैन। प्रधानमन्त्री ओली प्रश्नहरु रुचाउन छाडेका छन्। यस्तो बातावरणमा महाबहश कसरि हुन्छ होला नेकपा पार्टी भित्र ? पार्टीमा प्रश्न उठाउनेहरु बर्ग दुश्मन जसरि हेर्ने प्रवृती कार्यकर्ता मझ देखिएको छ। सामाजिक संजालहरुमा प्रश्न उठाउनेहरु प्रति अनेक लांक्षना लगाएर लखेट्ने गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा बहश कसरि होला प्रचण्डले उत्तर देलान्।
उनले भने ‘‘थोरै हुँदा संसारै जितिन्छ भनेको जस्तो मान्ने हामी अहिले सबै हुँदा केही पनि सकिँदैन क्यारे भने जस्तो किन भएको छ ?’ उनले प्रश्न गरे । उनले अघि भने, ‘हामी ८/९ लाख कार्यकर्ता छौं । यत्रो कार्यकर्ताको पंक्ति हुँदा जे पनि गर्न सक्छु भनेर आँट आउनुपर्ने । दलाल नोकरशाही एकैदिन लखेट्न सक्नुपर्ने तर, सक्दैनौं जस्तो लाग्छ ।’
उनले भन्ने गरेको दलाल नोकरशाहीलाई लखेट्न नसक्ने अवस्था किन आयो यती शक्तिशाली हुँदा पनि किन लखेट्न नसक्ने वा जनताको शासन स्थापना गर्न नसक्ने कारण बारे प्रचण्डले केही बताएनन् । उनले आफ्नो सरकार भएपनि किन यस्तो लाचार कुरा गरे भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न गहिरो मन्थन आवश्यक रहेको छ। देशमा अहिले नेकपाको एकछत्र राज हुँदा पनि आफुले चाहेको जस्तो ब्यवस्था ल्याउन कसले रोकिरहेको छ? यस्को उत्तर पनि उनले दिएका छैनन्।
उनले आफ्ना कार्यकर्ताहरु प्रति रोष प्रकट गर्दै भने -‘साथीहरु देख्दा रिस उठे जस्तो, देख्न नपरे पनि हुन्थ्यो, बोल्नै नपरे पनि हुन्थ्यो किन भएको छ ?’ उनले भने, केही मिस भएको छ ।’
उनले के मिस भएको भने भनेनन्। उनी अहिलेको नतृत्व प्रति खुशी छैनन् भन्ने स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । उनका यस्ता निराशाजनक कुराहरुले न सरकारलाई सहयोग गर्छ न पार्टीलाई । उनि कार्यकर्ता र जनतामा उर्जा भर्न सक्षम नेताका रुपमा चिनिन्छन्। उनले यस्तो निराशावादी कुरा गर्नुका पछाडि अर्का अध्यक्षको अधिनायकवादी शैली प्रतिको निराशा त होईन ? कारणहरु बिस्तारै खुल्दै जाला।